काठमाडौंमा डेंगुको जोखिम | Nagarik News - Nepal Republic Media
काठमाडौं - उपत्यकाबाहिरका जिल्लाहरुमा यो वर्ष प्रिमनसुनसँगै डेंगुको प्रकोप फैलिसकेकाले काठमाडौं उपत्यका पनि यसको उच्च जोखिममा रहेको विज्ञहरुले जनाएका छन्। सरुवा रोग चिकित्सक तथा राष्ट्रिय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले उपत्यकाका केही स्थानमा डेंगुको किटाणु भेटिएकाले सर्तक रहन सुझाएको छ। डेंगु ज्वरो एडिस एजिप्टाइ नामक लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ। कालो, सेतो रंगको लामखुट्टे सफा जमेको पानीमा मात्र उत्पन्न हुन्छ र यसले दिनमा मात्र टोक्छ।
डेगुं भाइरस संक्रमित लामखुट्टेले मानिसलाई टोकेमो डेंगुको संक्रमण हुन्छ। डेंगु संक्रमण नभएका लामखुट्टेले टोकेमा भने डेंगु सर्दैन। लामखुट्टेले टोकेको ५ देखि ७ दिनभित्र डेंगु संक्रमण हुन्छ। यो संक्रमणमा कडा ज्वरो आउने, आँखाको गेडी रातो हुने, शरीरमा बिमिरा आउने, आन्तरिक रक्तश्राव हुने, जोर्नी, मांशपेशी र हड्डी दुख्ने, नाक तथा गिजाबाट रगत बग्नेजस्ता लक्षण देखिन्छ।
त्यसैगरी उपचारमा आएका बिरामीहरु काठमाडौंकै रैथाने भएको र उनीहरु दुई साताको अवधिभित्र उपत्यकाबाहिर नगएको इतिहास रहेकाले काठमाडौंमै डेगु संक्रमण भइसकेको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. शेरबहादुर पुनले बताए। ‘हिजो मात्रै काठमाडौंको असन तथा लगनका दुई जनाले उपचार गरेर फर्किएका छन्। उनीहरुको इतिहास बुझ्दा रैथाने हुन्,’ डा. पुनले भने। उनीहरु दुवै असन र लगनबाट आएका ३० वर्षभित्रका महिला थिए।
यो घटनाले काठमाडौंमा डेंगुको थप जोखिम रहेको डा. पुनको दाबी छ। महाशाखाले केही दिनअघि मात्रै देशभरका विभिन्न जिल्लामा डेंगुको संक्रमणको फैलिँदो अवस्थाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ। हालसम्म संकलन भएका तथ्यांकअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा मात्र ६ जनामा डेंगुको संक्रमण भइसकेको छ। अन्य रोगको जस्तो ज्वरो आउने हुनाले यो रोगका बिरामीको सबै सम्पर्कमा नआएको हुनसक्ने डा. पुनको अनुमान छ। यो रोगको संक्रमणले प्रकोपको रुप लिएमा सबै यसको जोखिममा रहेको हुनसक्ने चिकित्सकहरुको दाबी छ। यो रोगबाट बच्नको लागि सामुदायिक स्तरमा हरेकले वातवरण सफा राख्ने, खुला भाँडामा पानी जम्मा गरेर धेरै दिन नराख्ने, दिनमा शरीर छोप्ने गरी पूरा लुगा लगाउने जस्ता उपाय अपनाउन सकिने चिकित्सकको सुझाव छ। यो बाहेक रोगको संक्रमण भइहालेमा समयमै उपचार गर्न डा. पुनको सुझाव छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०७६ ०७:५२ आइतबार
उपत्यका डेंगु जोखिम